Bavalele ongqongqoshe befuna izimpendulo - Ilanga News
Home Izindaba Bavalele ongqongqoshe befuna izimpendulo
Bakhala ngokuthi sebekhathele wukugoba amadlanga emahholo
KUZE kwalamula amaphoyisa evutha engabaselwe amalungu omphakathi akhahlanyezwa yizikhukhula ngesikhathi evalele ehhovisiongqongqoshe baKwaZulu-Natal efuna izimpendulo ngosizo aluthenjiswa. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA
KUPHAZAMISEKE ukusebenza emahhovisi ka-Hulumeni waKwaZulu-Natal, aseMayville, eThekwini, izolo ngoLwesithathu kugasela amalungu omphakathi kungalindele muntu, avalela ongqongqoshe beminyango eyahlukahlukene kulesi sifundazwe. La malungu omphakathi kuyizisulu zezikhukhula ezacekela phansi izakhiwo zawo ezingxenyeni ezahlukene zeTheku ngoMbasa (April) abehlabelela amaculo omzabalazo, ewasheba nezaga ezigadla kongqongqoshe. Abebasola ngokungalusukumeli phezulu udaba lwawo lokungabi nazo izindlu zokuhlala.
Phakathi kongqongqoshe abebefunwa wumphakathi ukuba baphendule, nguMnu Jomo Sibiya ophethe umnyango wezokuhlaliswa kwabantu nezezindlu kulesi sifundazwe noNkk Nomusa Dube-Ncube ophethe owezemali. Abefuna nezikhulu zikaMasipala weTheku nazo ezisolwa ngokungayinaki indaba yezisulu zalezi zikhukhula. Lezi zakhamizi okumanje zikhoseliswe emahholo nasezindlini zamasonto, zithi sekuyo hlangana izinyanga ezintathu zinganakiwe. Isikhalo esikhulu kakhulu ngesokuba zakhelwe izindlu.
Zithi kazifuni amadlangala, ngoba asheshe aphelelwe yisikhathi. UNkz Nontshumayelo Lenge (43), uthi inzima kakhulu impilo abayiphilayo emahholo abakhoseliswe kuwona. “Kusenzima namanje ukwamukela into eyangehlela. “Nganginendlu enamagumbi awu-8, yacekeleka phansi kwashona umyeni wami.”Kabuchazeki ubuhlungu engabuzwa lapho ngoba ngaphoqeleka ukuba umyeni wami ngizame ukumtakula ngaphansi kwamatshe ayemumbozile. “Kuleli sonto esibekwe kulona, kunzima kakhulu ngoba singenelwa yizigilamkhuba, zisephuce konke esinakho.
“Nabazalwane bamasonto bayazikhulumela izindlu zabo. “Akukuningi esikudingayo kuhulumeni waKwaZulu-Natal, sifuna izindlu ezihloniphekile njengoba nazo izikhulu zikahulumeni zihlala ezindlini ezinesithunzi,” kusho yena. UNkz Busisiwe Zondi (54), obekhihla isililo, uthe ubevele ehlala endlini engekho esimweni esigculisayo, kodwa lokho akusho ukuthi kufanele angayitholi indlu. “Ngineminyaka engaphezulu kwewu-20 ngaqala ukufaka isicelo sokwakhelwa indlu, kodwa kuze kube yimanje uhulumeni kawungisizi ngalutho. “Naphambilini abantu babenikwa ngapha nangapha izindlu, kodwa mina ngangayithola.
“Kwaze kwaba ngihlaselwa yizikhukhula ngihlala esimweni esingagculisi. Sifuna incazelo ecacile kuNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu (KwaZulu-Natal) nowemali ngoba sezwa kukhulunywa ngokuthi kunemali ebekelwe ukusixhasa, okuze kube yimanje kayikafiki kithi.
“Konke esiphila ngakho sikunikwa ngabantu bezinhlangano ezizimele,” kusho uNkz Zondi.
UMnu Thokozani Mncwabe, ongomunye wabaholi bomphakathi, uthe okubakhathaza kakhulu wukuthi uhulumeni uhlale umemezela izinhlelo zokubasiza kodwa zingafinyeleli kubona. “Okukhathaza amalungu omphakathi wukuthi sekuphele izinyanga engasizwa ngalutho ekubeni kwamenyezelwa ukuthi kuno-R1 billion obekelwe ukuwasiza akhelwe izindlu. “Okunye okudala ukuthi abantu babenolaka olungaka, yindlala ehlasele lapha emahholo njengoba nokudla akufinyeleli kubona njengokwesethembiso sikahulumeni,” kusho uMnu Mncwabe. Ephendula izikhalo zomphakathi uNkk Dube-Ncube, uthe zikhona izinhlelo zokusiza abakhoseliswe emahholo. Uthe kuyiqiniso ukuthi kunemali eyabelwe ukusiza abakhahlamezekile, kodwa yabalwe ukusiza ezweni lonke.
Previous articleIsimemezelo ngenqina nehlambo leSilo
Next article26 JUNE 2022